बलियाे फ्रान्सलाई राेक्ला त क्रोएसियाले ? – Shirish News
बलियाे फ्रान्सलाई राेक्ला त क्रोएसियाले ?
मस्को – करिब एक महिनाको अवधि र ६३ खेलपछि अन्ततः विश्वले नयाँ च्याम्पियनका लागि गरेको प्रतीक्षा आइतबार साँझ सकिनेछ । मस्कोस्थित लुझनिकी रंगशालमा आमने–सामने हुँदा युवा स्ट्राइकर किलियन एमबाप्पे र एन्टोनी ग्रिजम्यानप्रेरित फ्रान्स दोस्रो पटक विश्वकपको उपाधि उचाल्ने लक्ष्यमा हुनेछ भने कप्तान लुका मोडरिचप्रेरित क्रोएसिया पहिलो पटक विश्वविजेता बन्ने लक्ष्यमा हुनेछ।
रूसमा ४ साताअघि प्रतियोगिता सुरु हुँदा थोरै मानिसले मात्र यी दुई टोलीबीच फाइनल भिडन्त हुने अनुमान गरेका थिए।
विश्व फुटबलका स्टार स्ट्राइकरहरू लियोनल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो र नेइमार घर फर्किसकेका छन्। त्यस्तै विश्व फुटबलका परम्परागत शक्ति राष्ट्रहरू ब्राजिल, जर्मनी र अर्जेन्टिना पनि घर फर्किसकेका छन्।
सम्भवतः उपाधि भिडन्तमा विश्व फुटबलका शक्तिशाली राष्ट्र नभएकाले वा दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रको अनुपस्थितिले तटस्थ समर्थकका लागि भने फ्रान्स र क्रोएसियाबीचको फाइनल त्यति उत्सुकता नलाग्न सक्छ।
ब्राजिल, अर्जेन्टिना, जर्मनी र इटालीमध्ये कुनै पनि टोली फाइनल प्रवेश नगरेको यो केवल दोस्रो पटक हो । यसअघि २०१० मा दक्ष्णि अफ्रिकामा सम्पन्न विश्वकपमा पनि यी ४ राष्ट्रमध्ये कुनेै पनि टोली फाइनल प्रवेश गर्न सकेका थिएनन्। २०१० मा स्पेनले नेदरल्यान्ड्सलाई निराश पार्दै विश्वकपको उपाधि जितेको थियो।
रूस विश्वकप धेरैभन्दा धेरै दक्षिण अमेरिकी समर्थकको उपस्थितिले सधंै यादगार बनिरहे पनि दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र ब्राजिल र उरुग्वे क्वार्टरफाइन तथा अर्जेन्टिना र कोलम्बिया अन्तिम १६ बाट घर फर्किएपछि उनीहरूका लागि भने दुई युरोपेली राष्ट्रबीचको फाइनल फिका लाग्न सक्छ।
तर पनि यो विश्वकपको फाइनल हो, जहाँ फ्रान्ससँग उरुग्वे तथा अर्जेन्टिनाजस्तै दुई पटकको विश्वविजेता बन्ने सुनौलो अवसर छ। फ्रान्सले यसअघि १९९८ मा घरेलु मैदानमा ब्राजिललाई निराश पार्दै पहिलो पटक विश्वकपको उपाधि जितेको थियो। सो विश्वकपको उपाधि जित्दा डिडियर डेसच्याम्पस फ्रान्सेली टोलीका कप्तान थिए। अहिले उनी प्रशिक्षको भूमिकामा छन् र आइतबार क्रोएसियालाई निराश पार्न सके डेसच्याम्पस खेलाडी र प्रशिक्षकका रूपमा विश्वकप जित्ने तेसो व्यक्ति बन्नेछन्। यसअघि ब्राजिलका मारियो जागोलो र जर्मनीका फ्रान्ज बेकेनबाउरले खेलाडी र प्रशिक्षकका रूपमा विश्वकपको उपाधि जितेका थिए। ‘विश्वकपको फाइनल, यस्तो लााग्दै छ कि सानैदेखिको सपना साकार हुँदै छ,’ फ्रान्सका मिडफिल्डर ब्लाइसे मातौडीले भने, ‘हामी विश्वकप उपाधिको धेरै नजिक पुगिसकेका छौं र हामी त्यो छुन चाहन्छौं। यो हाम्रो जीवनकै अविस्मरणीय खेल हुनेछ।’
२००६ को जर्मनी विश्वकपको फाइनलमा इटालीलाई पेनाल्टी सुटआउटमा नतिजा सुम्पिएको फ्रान्स २०१६ मा घरेलु मैदानमा सम्पन्न युरोपियन च्याम्पियनसिपको फाइनलमा पोर्चुगलसँग स्तब्ध भएको थियो। त्यसैले डेसच्याम्पसको टोली लामो समयदेखिको प्रमुख प्रतियोगितामा उपाधिको खडेरी तोड्न चाहन्छ।
युरोपियन च्याीम्पयनसिपमा निराश हुँदाका केही सदस्य अहिले पनि फ्रान्सको टोलीमा छन्। एमबाप्पेको उपस्थितिले फ्रान्सेली टोलीमा छुट्टै रौनक ल्याएको छ। एम्बाप्पेले अन्तिम १६ को खेलमा अर्जेन्टिनालाई ४–३ ले निराश पार्दा आक्रामक खेल प्रस्तुत गर्दै २ गोल समेत गरेका थिए। उनले प्रतियोगितामा ३ गोल गरिसकेका छन्। तर अन्य खेलमा भने फ्रान्सले रक्षात्मक शैलीलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ।
फ्रान्सले समूह ‘सी’को विजेता बन्दै नकआउट चरणमा प्रवेश गर्ने क्रममा अस्ट्रेलिया र पेरूलाई पराजित गरेको थियो भने अन्तिम खेलमा डेनमार्कसँग गोलरहित बराबरी खेलेको थियो। जुन रूसमा जारी प्रतियोगिताको एक मात्र गोलरहित बराबरीमा सकिएको खेल हो।
फाइनल यात्रा तय गर्दासम्म फ्रान्सले अर्जेन्टिना, उरुग्वे र बेल्जियमलाई पराजित गर्र्दै आफूलाई उपाधिको प्रबल दाबेदारका रूपमा उभ्याएको छ। फ्रान्स र क्रोएसियाबीच आइतबार हुने फाइनलले १९९८ को विश्वकप सेमिफाइनलको झल्को दिनेछ।
स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा पहिलो पटक प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएको क्रोएसियाले त्यति बेला सेमिफाइनल प्रवेश गर्दै इतिहास रचेको थियो। तर फ्रान्सका रक्षक लिलियान थुरामले गरेको दुई गोलमा क्रोएसियाको फाइनल पुग्ने लक्ष्य विफल भएको थियो। २० वर्षपछि क्रोएसियाली टोलीले पहिलो पटक फाइनल प्रवेश गर्दै पुनः छुट्टै इतिहास रचिसकेको छ। ४० लाख जनसंख्या भएको क्रोएसिया विश्वकपको फाइनल खेल्ने उरुग्वेपछिको सानो राष्ट्र हो। यसअघि उरुग्वेले १९५० को विश्वकपको फाइनल खेल्दा त्यहाको जनसंख्या करिब २३ लाख मात्र थियो।
गु्रप अफ डेथका रूपमा हेरिएको समूह ‘डी’ बाट विजेता बन्दै अघि बढ्ने क्रममा नाइजेरिया, अर्जेन्टिना र आइसल्यान्डलाई पराजित गरेको क्रोएसियाले अन्तिम १६ मा डेनमार्क र क्वार्टरफाइनलमा आयोजक रूसको चुनौती पेनाल्टी सुटआउटमा समाप्त पारेको थियो। त्यस्तै क्रोएसियाले सेमिफाइनलमा इङ्ल्यान्डलाई अतिरिक्त समयमा निराश पारेको थियो।
त्यसैले ज्लाट्को डालिचको टोलीलाई रूस यात्रा उपलब्धिपूर्ण बन्दै आएको छ र उनीहरू सो उपलब्धिलाई थप एक कदम अघि बढाउने लक्ष्यमा छन्। जुन हालसम्मकै ठूलो उपलब्धि बन्नेछ।
‘हामीले फाइनल प्रवेश गर्नका लागि कठिन यात्रा गरेका छौं। सम्भवतः हामी विश्वकपको फाइनल प्रवेशका लागि ८ खेल खेल्ने एक मात्र राष्ट्र हौं। हामीले ६ खेल दौरान मैदानमा बिताएको समय हिसाब गर्ने हो भने त्यो करिब आठ खेल बराबर हुनेछ। यो जीवनमा एक पटक मात्र आउने अवसर हो। यहाँसम्म आउनु हाम्रा लागि कठिन थियो। तर यहाँसम्मको यात्रा तय गर्दा टोलीले बटुलेको अनुभव र मनोबल सार्थक हुनेमा म विश्वस्त छु,’ डालिचले भने।